Myat Shu - ဓာတ်ပုံမှတ်စု
You are here : Myat Shu » Archives for ဓာတ်ပုံမှတ်စု
မြန်မာ့ရိုးရာ ဆေးမင်ကြောင် ဒီဇိုင်များ (၃)
Published By Myat Shu On Monday, July 23rd 2012. Under ဓာတ်ပုံမှတ်စု, မျက်ရှု
ဆေးမင်ကြောင် ထိုးနှံတဲ့ဓလေ့ဟာ မျက်မှောက်ခေတ်မှာ ပြန်လည်ပြီး ဆန်းသစ်လာတယ်လို့ ဆိုရပါမယ်။ တိုးတက်လာတဲ့ နည်းပညာကြောင့် ယနေ့ခေတ် ဆေးမင်ကြောင် ဒီဇိုင်းလက်ရာများမှာ အနုစိတ်၊ ကြွရွ၊ သေသပ်လာတာကိုလည်း သတိထားမိပါတယ်။ ရှေးရှေးတုန်းက မြန်မာလူမျိုးတို့ ထိုးနှံခဲ့တဲ့ ဆေးမင်ကြောင် လက်ရာတွေကို ယနေ့ခေတ် တက်တူးဝါသနာအိုးတွေနဲ့ မြန်မာမှုအနုပညာလက်ရာတွေကို တရှိုက်မက်မက် ခုံမင်နှစ်သက်တတ်သူတွေ လေ့လာနိုင်စေဖို့ ဆင်ဖြူကျွန်းအောင်သိန်း ပြုစုတဲ့ မြန်မာ့ထိုးကွင်း မင်ကြောင်ဓလေ့ စာတမ်းကနေ ထုတ်နုတ်ပြီး ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ မျက်ရှုဝိုင်းတော်သားများ Resolution ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဓာတ်ပုံ ရယူလိုပါက အထက် ဖော်ပြပါ ဓာတ်ပုံကို Click လုပ်ပါ။ Resolution ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဓာတ်ပုံ ရယူလိုပါက အထက် ဖော်ပြပါ ဓာတ်ပုံကို Click ... Continue Reading
မြန်မာ့ရိုးရာ ဆေးမင်ကြောင် ဒီဇိုင်များ (၂)
မြန်မာ့ရိုးရာ ဆေးမင်ကြောင် ဒီဇိုင်းများ (၁)
Published By Myat Shu On Wednesday, October 12th 2011. Under ဓာတ်ပုံမှတ်စု
ပြိုင်ပွဲ ၀င်နေတဲ့ ရိုးရာဆင်၊ အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက်၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဓာတ်ပုံ - ထိပ်တင်အောင် ပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့ ဘော်ကြယ်ဆင်၊ အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက်၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဓာတ်ပုံ - ထိပ်တင်အောင် အကအလှ အစွမ်းပြနေတဲ့ မိုးဇော်အဖွဲ့။ အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက်၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်။ ဓာတ်ပုံ - ထိပ်တင်အောင် ဓာတ်ပုံများ ပေးပို့ပေးပါသော (ကို) ထိပ်တင်အောင်အား မျက်ရှုအဖွဲ့မှ အထူး ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဤဓာတ်ပုံများကို ကူးယူအသုံးပြုမည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံဆရာ (ကို) ထိပ်တင်အောင်၏ ခွင့်ပြုချက် ရရန်လိုသည်။ ... Continue Reading